TBA CHE α-AMY Digestive System Kuongorora Rapid Reagent Kit-Pfungwa Yekutarisira Kuedza-Sinocare
TBA CHE α-AMY Digestive System Kuongorora Rapid Reagent Kit
[email inodzivirirwa] Iyo Yese Bile Acid / Cholinesterase / α-Amylase Reagent Kit inoitirwa kuyera huwandu hwehuwandu hweasidhi acid (TBA), uye kuyera chiitiko che cholinesterase (CHE) uye α-amylase (α-AMY) muvanhu venous serum. Kiriniki, inonyanya kushandiswa semubatsiro mukuongororwa kwezvirwere zve hepatobiliary kana kukuvara, organophosphorus chepfu uye chirwere chepancreatic.
Yese bile acid (TBA) ndiyo yekupedzisira chigadzirwa checholesterol metabolism muchiropa uye inowanikwa mukutenderera kwe enterohepatic. Iyo inowirirana zvakanyanya nekutora, metabolism uye kugadziriswa kwecholesterol. Serum TBA inoratidzira isinganzwisisike chiratidzo chiratidzo chekukuvara kwechiropa kwakanyanya uye chirwere chekugaya chirwere. TBA inonyatsoratidza iyo excretory basa rechiropa, sezvo TBA inosimudza kana paine hepatic cell lesion kana enterohepatic kutenderera kusagadzikana.
CHE iglycoprotein inowanikwa mumuviri wemunhu muchimiro cheizzyymes dzinoverengeka. Kuyera kweCHE chiitiko inzira yakakosha inobatsira kuongorora kurwisa kweophophophophorus uye kuongorora kukuvara kwechiropa kwakanyanya.
α-AMY inonyanya kuvanzwa nesialaden nepancreas, uye inogona kusefetwa ne glomerulus. Parizvino, kuonekwa kweA-AMY ndiyo nzira huru yekuongorora kurwara kwepascreatitis.
Liquid phase reaction system, kushandisa ratidziro nzira inotungamira kune chaiyo mhedzisiro